> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Nokia N97
Ma suurogalbaa in kabsado files tirtiray ka Nokia N97?
Dhaco tirtiray files ka Nokia N97? Fadlan ha noqon argagax weyn. Waxaa gebi ahaanba posso soo kabsado tirtiray sawir, video iyo maqal ah ka telefoonada Nokia N97.
Waa maxay sababta? Marka ay timaado in telefoonada smart, waxaa badanaa jira gudaha kaararka xusuusta, loo isticmaalaa in uu kaydiyo aad files warbaahinta sida music, sawiro iyo filimo. Marka aad tirto faylasha, meel ku qoran kaadhka xusuusta loo isticmaalaa in lagu kaydiyaa kuwa files waxa lagu calaamadiyaa sida banaan oo diyaar u ah files cusub, oo la tirtiro files noqon aan la arki karin. Haddii aadan gelin files cusub, aad si fudud u soo kaban karto, kuwa files tirtiray ka kaadhka xusuusta aad Nokia N97.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray photos & videos ka Nokia N97
Si aad u soo ceshano files tirtiray ka Nokia N97, aad u baahan tahay si aad u hesho qalab kabashada Nokia N79 ka hor wax kale samayn. Doorashada barnaamij lagu kalsoonaan karo waa mid aad u muhiim ah, sababta oo ah kuwa aan lagu kalsoonaan karin qaar ka mid ah waxay dhaawici kartaa files lumay oo waxaan ka dhigi unrecoverable. Haddii aadan fikrad wanaagsan hore, isku day Wondershare Photo Recovery , ama Wondershare Photo Recovery for Mac ? Labada iyaga si buuxda u taageeraan dib u soo kabashada ee photos, video iyo files audio ka Nokia N97, wax dhib ah maleh haddii ay sababta loo waayey tirtirka, qaab ama haddii kale gaarid. Waxa kaliya ee aad qaadataa xoogaa daqiiqado ah dib u soo ceshano dhammaan faylasha lumay ee 3 tallaabo.
Isku day version maxkamad free of this software kabashada Nokia N97 hadda.
Step1. Burcad barnaamijka soo kabashada Nokia N97
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda barnaamijka on your computer, waxa ay haatan u abuurtaan, oo waxaad heli doontaa interface ee soo socda. Guji "Start" badhanka si ay u bilaabaan soo kabashada file Nokia N97. Dhanka kale, hubi in aad telefoon Nokia N97 ayaa si fiican u xiran kombiyuutarka.
Step2. Baarista Nokia N97 for files lumay
Halkan aad Nokia N97 u muuqataa sida warqad drive ah. Waxaa Dooro iyo bilaabaan inay baadhaan files lumay ee aad telefoonka Nokia N97 adigoo riixaya "Scan" button.
Step3. Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh ceshan photos & videos ka Nokia N97
Tallaabo hore hadda. Waxaad ku eegaan karo oo dhan photos oo baadh kuwii faylasha aad rabto oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer ka mid ah.
Fiiro gaar ah: Ha mar badbaadin xogta soo kabsaday aad Nokia N97 ama kaadhka xusuusta. Raadi meel kale, waayo, sida on your computer ama disk kale dibadda, Ammaanka awgiis.
Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Max OS X El Capitan 10.11